DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-6AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos” | Laashin iyo Hal-abuur
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-6AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos”
Sooyaalka muuqbaahiyaha (Telefishinka)
muuqbaahiyihii ugu horreeyay ee carra-edeg ka soo muuqday, waxay aheyd; billowga qarnigii labaatanaad, wuxuuna ka soo ifbaxay, qaaradda Ameerika dhammaadka dabshidkii 1920-meyadii iyo horraanta 1930-naadkii. muuqbaahiyihii ugu horreeyay ee farsamaysan waxaa la dhihi jiray: W3XK waxaana sammeeyay Charles Francis Jenkins (oo ka mid ah hal-abuurayaasha TV-ga farsamada leh). muuqbaahiyahaasi wuxuu baahiyay baahintiisii ugu horreysay July 2, 1928-dii.
TV-ga waxaa laga helaa balaayiin guri oo adduunka ah, balse, boqol sano ka hor, qofna ma oga waxa TV-yahay. Xaqiiqda, ilaa dhammaadkii 1947-tii, kaliya dhowr kun oo Mareykan ah ayaa lahaa telefishanno laga leeyahay. Sidee tiknoolajiyada noocan oo kale ah u soo jeesatay hal-abuurka halbeegga ah uguna beddelaysaa taageerada qolka fadhiga? Maanta waxaan sharraxeynaa muuqbaahiyaha sheekadiisa oo dhammeystiran oo ay ku jirto halka ay mustaqbalka mari karto.
TV-yada farsamada qarniyadii 19-aad iyo horraantii qarniga 20-aad, ka hor telefishanka korontada, waxaan haysannay telefishinno farsamo ah. Noocyadan telefishanka ah ee hore waxay billaabeen inay soo baxaan horraantii qarnigii 19-aad. Waxay ku luglahaayeen sawir farsamo, sawirradaas ka dibna ku wareejinta sawirradan shaashad. Marka la barbardhigo telefishinnada elektiroonigga ah, waxay ahaayeen kuwo si aad ah qunyar socod ah.
Mid ka mid ah telefishannadii ugu horreeyay ee farsamo yaqaan ah ayaa isticmaalay cajalad wareeg ah oo leh godad loo qaabeeyey qaab wareeg ah. Cutubkan waxaa si madax-bannaan u abuuray laba hal-abuurayaal: hal-abuure u dhashay Scottish-ka John Logie Baird iyo hal-abuure Mareykan ah Charles Francis Jenkins. Labada qayboodba waxaa la allifay horraantii 1920-meeyadii. Labadan khabiir ka hor, hal-abuurka reer Jarmal ee Paul Gottlieb Nipkow wuxuu soo saaray telefishankii ugu horreeyay ee farsamo. Qeybta ayaa sawirro u soo dirtay fiilooyin bir ah oo wareegaya. Si kastaba ha noqotee, halkii loogu yeeri lahaa aaladda TV, Nipkow wuxuu ugu yeeray “telescope koronto”. Qalabka wuxuu lahaa: 18 xarriiq oo xallin ah.
Sannadkii 1907-dii laba hal-abuurayaal oo Ruush ah, Boris Rosing iyo Ingiriisigii A.A. Campbell-Swinton ayaa la isku daray tuubada ra’yiga ee cathode-ka oo leh nidaam iskaashato farsamo si loo abuuro nidaam telefishin oo gebi ahaanba cusub. Ugu dambeyntiina, dadaalladii ugu horreeyay ee hal-abuurayaashani waxay u horseedi doonaan telefishanka koronto ee ugu horreeya adduunka dhawr sano ka dib. muuqbaahiyihii ugu horreeyay ee elektaroonig ah waxaa la hindisay 1927-dii. Muuqbaahiyihii ugu horreeyay ee elektaroonig ah waxaa abuuray hal-abuure 21-jir ah oo lagu magacaabo Philo Taylor Farnsworth. Khabiirkaasi wuxuu ku noolaa guri aan koronto lahayn ilaa uu ka gaaray 14-jir.
Laga soo billaabo dugsiga sare wuxuu billaabay inuu ka fekero nidaam qabsan kara sawirrada dhaqaaqa u rogo sawiradaas koor, ka dibna u rara sawirradaas mowjadaha raadiyaha aalado kala duwan. Farnsworth wuxuu mayl ka horreeyay dhammaan nidaamyada telefishanka farsamo ee weligood la allifay. Nidaamka Farnsworth wuxuu qabsaday sawirro dhaqaaq ah oo wata koronto elektaroonig ah (asal ahaan kamarad hore). Sawirkii ugu horreeyay abid ee telefishinku baahiyo wuxuu ahaa khad fudud. Mar dambe, Farnsworth wuxuu si caan ah u baahin lahaa calaamadda doollarka oo uu la socdo TV-ga, ka dib markii maal-galiye suurtagal ah uu weyddiiyo, “Goorma ayaan arki doonnaa dhowr doollar oo arrintan ku saabsan, Farnsworth?”
Intii u dhaxeysay 1926-dii iyo 1931-dii, hal-abuurayaasha telefishanka farsamada ayaa sii waday hagaajinta iyo tijaabinta curintooda, balse, dhammaantood waxaa lagu xukumay inay noqdaan kuwo duugoobay marka la barbar dhigo telefishinnada korantada casriga ah: markii ay ahayd: 1934-tii, dhammaan telefishannada waxaa loo beddelay nidaamka elektaroonigga ah. La fahmi karo, dhammaan nidaamyada telefishanka hore waxay soo gudbiyeen muuqaallo madow iyo caddaan ah. Midabka TV-ga, si kastaba ha ahaatee, waxaa markii ugu horraysay aragti ahaan loo soo celiyay; 1904-tii waana wax aan gadaal uga hadli doonno.
Sidee ayey muuqbaahiyayaashii hore u shaqeeyeen?
Labada nooc ee muuqbaahiyaha ee kor lagu soo sheegay, makaanikada iyo elektaroonigga, waxay u shaqeeyeen siyaabo aad u kala duwan. Waxaan ka dhawaajinnay sida TV-yadaani kor ugu shaqeeyeen, balse, waxaan ku gali doonnaa sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan qaybtaan.
Telefishinnada farsamada ayaa ku tiirsanaa saxannada wareegaya si ay sawirrada uga soo gudbiyaan gudbiye ilaa riyaha. Soo gudbiyaha iyo kan wax qaata labaduba waxay lahaayeen saxanno wareegaya. Diskiga waxay ku lahaayeen godad dhexdooda diskiga ku wareegsan, dalool walbana waxyar ayuu ka yaryahay kan kale. Si aad u gudbiso sawirrada, waa inaad ku dhejisid kamarad qol gebi ahaanba mugdi ah, ka dibna meel iftiin ah aad u dhalaalaya dhigo diskiga gadaashiisa. Qalabkaas waxaa lagu rogi doonaa mootada si loogu sameeyo hal kacaan qaab kasta oo sawirka TV-ga ah. Baird telefishanka farsamo ee hore wuxuu lahaa 30-godad, wuxuuna rogay; 12.5-jeer ilbiriqsikiiba. Waxaa ku jiray muraayad diskiga hortiisa ah inuu iftiinka u jeediyo maaddada. Markii uu iftiinka mawduuca ku dhaco, iftiinkaasi wuxuu ka dhex muuqan doonaa unug sawir qaade ah, kaas oo markaas u rogaya tamartaan iftiinka ah koronto. Dareenka korantada waxaa hawada loogu gudbiyaa qaate. Qalabka diskiga ee ku yaal qalabka wax lagu duubo wuxuu ku wareejin doonaa xawaare la mid ah kan diskiga ee kamaradda gudbiyaha ah (matoorrada waa la waafajinayaa si loo hubiyo gudbinta saxda ah).
Dhammaadka helitaanka waxaa lagu soo qaatay qalabka raadiyaha, kaas oo helay idaacadaha kuna xiraya laambad neon ah oo la dhigo diskiga gadaashiisa. Disku wuu wareegayaa halka laambadana ay daminayso nalka saami ahaan korantada uu ka helayo qaataha. Ugu dambeyntiina, nidaamkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku daawato sawirka dhinaca kale ee diskiga, in kasta oo aad u baahan tahay muraayad weyneyso ah. Waa tan sida nidaamku ugu shaqeeyo qaabka jaantuska:
Telefishinnada Elektaroonigga ah:
Waxaa jira sabab aan u joojineyno adeegsiga telefishinnada farsamada: telefishinnada elektaroonigga ah aad ayey uga sarreeyeen. Telefishinnada elektaroonigga ah waxay ku tiirsan yihiin tiknoolajiyad la yiraahdo: Cathode Ray Tube (CRT) iyo sidoo kale laba ama in ka badan anode. Anode-yada ayaa ahaa terminals-ka wanaagsan cathode-na wuxuu ahaa terminal taban. Qaybta “Cathode” ee Cathode Ray Tube waxay ahayd: fiilo kulul oo ku lifaaqan tubbada dhallada ah: (“T” ee CRT). Cathode wuxuu ku sii deyn doonaa dogobka elektaroonigga meel bannaan oo tuubada ah (oo runti ahayd meel bannaan).
Dhammaan elektaroonigyadan la sii daayay waxay lahaayeen xukun diidmo ah waxayna sidaas u soo jiidan lahaayeen anode si togan loo soo eedeeyay. Noocyadan waxaa laga helay dhammaadka CRT oo ahayd: shaashadda telefishanka. Maaddaama elektiroonigyada la sii daayay hal dhinac, waxaa lagu soo bandhigay shaashadda telefishanka dhinaca kale. Dabcan, toogashada elektaroonigga ka dhanka ah shaashadda muraayadda sawir ma sameyneyso. Si loo sameeyo sawirro, gudaha shaashadda telefishanka ah ayaa lagu dahaaray fosfooras. Elektaroonigyadu waxay sawir ku marin doonaan shaashadda hal xarriiq markiiba.
Si loo xakameeyo furka elektaroonigga ah ee CRT-yadu waxay adeegsadaan laba “gariiradda isteerinka”. Labada isteerinku, waxay adeegsadaan awoodda birlabta ah si ay ugu riixaan birta korantada meesha la rabo shaashadda. Mid ka mid ah isteerinka isteerinka wuxuu korontada ku riixayaa kor ama hoos, halka kan kale uu u riixayo bidix ama midig.
Xarumihii Telefishinka ee ugu horreeyay Ameerika:
Telefishannadii ugu horreeyay ee adduunka ayaa markii ugu horreysay billaabay inay ka soo muuqdaan Ameerika dabayaaqadii 1920-meyadii iyo horraantii 1930-naadkii. Telefishinkii ugu horreeyay ee farsamaysan waxaa la dhihi jiray W3XK waxaana abuuray Charles Francis Jenkins (oo ka mid ah hal-abuurayaasha telefishanka farsamada). TV-gaas wuxuu baahiyay baahintiisii ugu horreysay July 2, 1928. Mid ka mid ah telefishannada ugu horreeya adduunka, WRGB, wuxuu leeyahay sharaf inuu noqdo kan keliya ee adduunka si joogto ah u shaqeeya tan iyo 1926-dii ilaa maanta.
Telefishinkii ugu horreeyay oo lagu diyaariyo Ameerika:
Telefishinnadii ugu horreeyay ee ganacsi ahaan soo saaray Ameerika waxay ku saleysnaayeen nidaamka telefishanka farsamada oo ay sameeyeen nashqadaha telefishanka ee John Baird. Noocyadan waxaa loo soo bandhigay dadweynaha bishii Sebtember, 1928-dii. Waxay qaadan doontaa ilaa 1938, hase yeeshe, ka hor intaan la soo saarin telefishinnada elektaroonigga ah ee Mareykanka lagana sii daayo ganacsi ahaan. Waxay ahaayeen kuwo si deg deg ah loo garraacay ka dib markii la sii daayay.
Xakamaynta hagihii (Remote) kowaad ee Telefishinka:
Telefishinkii ugu horreeyay ee adduunka laga hago waxaa loo yaqaannay: Tele-Zoom, waana adag tahay in loo qaybiyo kontoroolka fog. Zoom-ka waxaa loo isticmaalay oo kaliya in lagu “dheereeyo” sawirka telefishanka. Uma adeegsan kareysid inaad wax ka beddelatid kanaallo kasta ama aad TV-ga dansatid ama dansid Tele-Zoomka waxaa la sii daayay 1948-dii.
Kantaroolka fog ee “run” ah waxaa soo saaray Zenith waxaana la sii daayay 1955-tii. Kantaroolada fog ee laga hago waxay telefishinka shidi karaan ama damin karaan kana baddalan karaan kannaalka. Waxa kale oo ay ahayd gabi ahaanba wireless. Barnaamijkii Telefishanka ugu horeeyay ee Amerika. Maanta, shabakadaha Mareykanku waxay ciyaaraan kumannaan barnaamijyo kala duwan ah maalin kasta. Mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku leeyahay jiritaankiisa barnaamijkii telefishanka ee ugu horreeyay ee Mareykanka, kaas oo loogu magac daray boqoradda.
Muuqbaahiyihii ugu horreeyay ee ganacsiga:
Telefishankii ugu horreeyay ee Ameerika laga leeyahay wuxuu billaabay inuu baahiyo 1928-dii. 13-kii sano ee ugu horreysay jiritaankiisa, telefishanku wuxuu si xushmad leh uga madax bannaanaa ganacsiga. Baahintii ugu horreysey ee ganacsi ee Mareykanku ma aysan dhicin ilaa -dii Luulyo, 1941-dii oo ah markii ugu horreysay ee xayaysiis Mareykan ah la sii daayo. Xayaysiiska ayaa loogu talagalay daawashada Bulova wuxuuna socday: 10-ilbiriqsi. Waxaa laga sii daayay NBC.
Muuqbaahiyaha midabka ee Ameerika:
Telefishinka midabku wuxuu xididdadiisa raadiyaa ilaa 1904-tii, markii hal-abuur reer Jarmal ah uu helay patent-ka telefishanka midabka. Si kastaba ha noqotee, hindisahaasi dhab ahaantii ma lahayn telefishin midab shaqeynaya. Waxayna ahayd uun fikrad la ilaaliyey. Nidaam telefishin midab fikradeed leh ayaa ka muuqday 1925-dii, hal-abuuraha Vladimir Zworykin. Si kastaba ha noqotee, nidaamkan waligiis looma beddelin run. Dhammaan isku daygii lagu doonayey in loogu beddelo xaqiiqda ayaan ku guuleysan. Telefishanka midabka ayaa la dhigay dhabarka dambe ilaa 20-kii sano. 1946, fikradda telefishanka midabka ayaa si cusbooneysiin leh dib loogu cusbooneysiiyay. Sida The History Of Television.com uu sharaxayo,
Markii ay ahayd: 1946, dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ahaa sooyaal, dadka ku nool Ameerika, waxayna doonayeen inay soo kabtaan dhammaan xilliyadii dagaalka uga lumay. Telefishanka madow iyo caddaan waxaa loo haystay mid duug ah waxayna ahayd amminkii wax cusub la qaban lahaa. Tani waa markii ugu horreysay ee nidaamyada telefishanka midabka loo billaabay in si dhab ah loo tixgeliyo.
Dagaalkii midabbada telefishanka ee Mareykanka waxaa ku dhex maray laba shirkadood oo waaweyn: CBS iyo RCA. CBS waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee sameysa telefishan midab leh. Si kastaba ha noqotee, cilladda ugu weyni waxay ahayd inuu ahaa telefishin farsamo oo ku saleysan nidaamkiisii asalka ahaa ee John Baird. Sidaa darteed, kuma habboonayn telefishannada madow iyo caddaanka ah ee laga adeegsado Ameerika oo dhan.
In kasta oo cilladdaan weyni jirto, FCC waxay caddeysay in telefishanka midabka CBS uu noqonayo mid heer qaran ah. RCA ayaa ka dhiidhisay, iyada oo sheegtay inay caddaalad darro tahay in laga dhigo midabka TV-ga CBS halbeegga marka ay isticmaali karaan malaayiin macaamiil ah oo ku kala baahsan Ameerika (badankooduna waxay leeyihiin telefishanka RCA).
RCA waxay sii wadday inay soo saarto nidaam telefishin midab u gaar ah oo la jaan qaadi kara macaamiishooda noocyada RCA. Sannadkii 1953, FCC waxay qireen in nidaamka TV-ga midabka RCA uu ka fiicnaa. Laga billaabo 1954, nidaamyo midab RCA TV ah ayaa laga iibiyay Ameerika oo dhan. Telefishanka midabku wuxuu lahaa dhibaato billow ah oo la mid ah tii 3D TV-ga iyo tiknoolajiyadda kale: dadku waxay lahaayeen teknoolojiyadda midabka TV-ga, balse, weriyeyaashu ma soo saarin waxyaabaha ka kooban midabka TV-ga. Dad aad u yar ayaa lahaa telefishannada midabka leh intii udhaxaysay 1954 iyo 1965. Sikastaba, laga bilaabo 1966, barnaamijyada midabada TV-ga ayaa laga sii daayay Ameerika oo dhan, taasoo horseedday kor u kaca iibka telefishinka midabka leh. Waxaa hubaal ah in macalimiinta iyo engineerradu in ay ardayda baraneyso saxaafada iyo teknolajijadda cusub in ay sharraxaad iyo faahfaahin intaan ka dheer iyo baraatikaba in ay siiyaan ardayda.